E jikọrọ Porn na ịrị elu na mmekorita nwoke na nwaanyị Ụgwọ Ọrụ Ụgwọ
Home Iwu Nbili na mpụ nwoke na nwanyị
Ogo nke mmekorita nke nwoke na nwanyi bu ihe di elu na Scotland ebe ndi ikpe na-ekwuputa na mmekorita nwoke na nwanyi na-akwado 80% nke ikpe ikpe na High Court of Justiciary.
Onye ikpe kachasị elu na England na Wales, Onyeikpe Onyenwe Anyị, Onyenwe anyị Thomas nke Cwmgiedd, kwuru na nsogbu ikpe mmekọahụ na-ebili ma a pụghị ịkọwa ya naanị dịka akụkọ ikpe na-abịa. "Ụfọdụ n'ime ihe ndị na-akpali agụụ mmekọahụ karịrị ihe ha na-egosi na o doro anya na ọ na-emetụ mmadụ n'ahụ." Ọ bụ ezie na ọ na-ekwu banyere mmetụta ọjọọ nke ihe dị otú ahụ na ndị ọkàikpe, ọ dịkwa ka ọnụ ọgụgụ mmadụ dum bụ ndị a vidiyo na-egosi ikiri ihe dị ịrịba ama.
Vidio a na-egosi Dave Thompson, Onye isi ndị uwe ojii nke West Midlands Police, na-egosi n'ihu Kọmitii Na-ahụ Maka Ime Obodo nke nzuko omeiwu na 25 October 2017. Ọ na-ekwu maka otu o si awụ akpata oyi n'ahụ maka ihe mmekọ nwoke na nwanyị nke ndị isi ya na-achọta ụmụ nwoke na UK na-esite na ọchịchịrị weebụ. (The Independent, 28 sekọnd)
Porn porn bụ nnukwu nnukwu azụmahịa. Nnweta dị ọnụ ala ma dịkwa mfe ịnweta ịntanetị yana yana amaghị aha ya emeela ka smartphones bụrụ 'nnweta' na ngwa ahịa dị mfe.
More Brits na-ekiri porn ha na smartphones karịa na kọmputa. 62% nke ụmụaka afọ 12-15 nwere smartphones dị ka akụkọ 2013 Ofcom.
Ụbụrụ na-emetụta ihe na-akpali agụụ mmekọahụ nke ịntanetị, karịsịa na ntụrụndụ nke ndị na-eto eto, nwere ike ịkpata àgwà mkpasu iwe na nke na-akpali agụụ mmekọahụ nke nwere ike iduga n'inwe mmekọahụ.
Ọbụna na enweghị mwakpo mmekọahụ, a pụrụ ikpe mmadụ ikpe maka oke mpụ. Dịka ọmụmaatụ, otu nwa nwoke nwoke na-eto eto, anyị ga-akpọ ya Bob, mara na o nwere ụmụ foto ndị na-akpali agụụ mmekọahụ n'ihi ọnụ ọgụgụ nke foto ọhụụ o nwere na ekwentị ya. Ndị a bụ foto ndị e zigara ya na Facebook na ndị ọzọ na-elekọta mmadụ mgbasa ozi site na ụmụaka na-egosi dị ka ndị tozuru eto eto. Ọ bụ ezie na ọ hụghị ụmụ agbọghọ ndị a, naanị ihe ha nwere bụ ka ọ bụrụ onye a ga-ekpe ikpe.
Ihe ga-esi na nkwenye siri ike maka mmekorita mmekọahụ dị ka ihe onwunwe nke ụmụ-akpali agụụ mmekọahụ ụmụaka ga-abụrịrị ọkwa banyere Mmekọahụ Mmekọahụ. Kedu ihe nke a pụtara na omume maka onye dị ka Bob?
Ọ pụtara na ọ ga-efunahụ profaịlụ ya dị elu, ọrụ dị mma. Ọ gaghị enwe ike ịnweta visa ka ọ kpọga enyi ya nwanyị na Disneyland na United States ma ọ bụ n'ebe ọ bụla ọzọ. Ọ bụrụ na emesịa ha nwere ụmụ nke ha, ọ ga-edozi ya site n'aka ndị ọrụ mmekọrịta ọbụna mgbe aha ya gasịrị na-edebanye aha na Mmekọahụ Mmekọahụ. Ihe a nile mere n'ihi amaghị ihe banyere iwu ahụ na ikekwe ụfọdụ ihe efu nwata na mmasị nke ọtụtụ ndị na-efe ofufe, nwa okorobịa wannabe WAGs kpebisiri ike inwe òkè nke ndụ ndị a ma ama.
Ime ka ndị na-eto eto mara banyere ihe ize ndụ ndị a taa dị oke egwu. Ọ bụghị naanị 'nsogbu ndị ọzọ' na ịtụ egwu ejiji n'ịntanetị ndị na-elekọta ha kwesịrị ịkpachapụ anya, ma nsogbu ụmụ ha na-eme onwe ha n'amaghị ama na-achọ ihe ụtọ na ama ha, ma na-eme ihe 'onye ọ bụla ọzọ' yiri ka ọ na-eme . Igwe foto ndị na-akpali agụụ mmekọahụ n'Internet na-emetụta ụbụrụ dị nnọọ iche site na TV ma ọ bụ magazin porn na DVD.
Inye ma obu nkesa umu ihe omuma nke umuaka abughi iwu. Ọ bụrụ na ịchọta onwe gị na-ele ndị a ma na-echegbu onwe gị, kpọtụrụ ọrụ ebere ahụ Kwụsị ya Ugbu a! Enyemaka ma ọ bụ Lucy Faithfull Foundation. Ọbụna ma ọ bụrụ na ị bu n'obi izute nwa maka ebumnuche inwe mmekọahụ, ịnwe onyonyo naanị nwere ike ime ka ndị uwe ojii leta gị. Kpọtụrụ ndị ọrụ ebere ndị a kwa ma ọ bụrụ na ndị uwe ojii abịala gị.
<< Imegwara Porn Ihe nkiri Porn >>